उपत्यकामा पहिलो दिन खस्यो ३२६ मत, अध्यक्षका दुवै प्रत्याशीले गरे मतदान (फोटोफिचर) – Health Post Nepal
२०७६ माघ १७ गते १८:५३
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि जारी निर्वाचनमा उपत्यकामा शुक्रबार पहिलो दिन ३२६ मत खसेको छ । मंगलबार (२१ माघ) सम्म मतदान जारी रहने निर्वाचन कार्यतालिका छ । उपत्यकाका लागि प्रदर्शनीमार्गस्थित संघको केन्द्रीय कार्यालयमा एक मात्र निर्वाचन केन्द्र तोकिएको छ ।
उपत्यकाभित्र एनएमएका कुल ६ हजार ३ सय ५१ मतदाता छन् । शुक्रबार ५.१५ प्रतिशत मात्र मतदान भएको हो । अध्यक्षका दुवै प्रत्याशीले पहिलो दिन नै मतदान गरेका छन् ।
मतदानस्थलमै भड्किलो प्रचार
देशको बौद्धिक वर्ग चिकित्सकको पेसागत छाता संगठनको निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना शून्यप्रायः देखिएको छ । मतदानस्थलमै चिकित्सकहरू ठूला–ठूला ब्यानर, पर्चा–पम्प्लेटसहित मत मागिरहेका देखिए ।
विशेषगरी डा. खराल नेतृत्वको समावेशी समूहले मतदानस्थलमा भड्किलो र खर्चिलो व्यवहार देखाएको छ । समावेशी समूहको प्रचारमा उम्मेदवार र मतदाता मात्र नभई गैरमतदाता र गैरचिकित्सकसमेत देखिए । नेकपानिकट केही नेता–कार्यकर्ताले समेत मतदानस्थलमै पुगेर डा. खराल नेतृत्वको समूहलाई भोट मागेका थिए । उनीहरू प्रगतिशील समूहको पहिचान झल्किने निलो रङको टोपीमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमालेकी स्वास्थ्य विभाग प्रमुख नेकपा नेत्री सुजिता शाक्य मतदानस्थलभित्रै प्रवेश गरेपछि चिकित्सकहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । दुवै पक्षको प्रचारशैली निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत देखिन्थ्यो ।